Shanghai Air Industry & Trade Co., Ltd. dị na Shanghai ma bụrụ ọkaibe n'ichepụta na ibupu ụdị compressors ikuku na akụrụngwa ọgwụgwọ ikuku. Ebumnuche anyị bụ inye ndị ahịa ọpụrụiche yana ngwaahịa dị mma yana ike ịchekwa ikuku.
Usoro ngwaahịa anyị na-ekpuchi nfuli ikuku piston, ihe nrụpụta ikuku na-eduzi kpọmkwem, igwe mpịakọta ikuku na-ebugharị eriri, igwe ikuku ikuku na-enweghị mmanụ, ihe nrụgharị ikuku rotary, igwe nkụ, ihe nzacha ikuku na ngwa niile nke ngwaahịa ndị a. Ụlọ ọrụ anyị etinyela aka na ngalaba Compressor ihe karịrị afọ 20, wee were ndị ọrụ 200 kpuchie square mita 8500. Anyị agafeela ISO9001: asambodo sistemụ ogo 2008 ma tinye aka na nyocha teknụzụ, nrụpụta nkenke na njikwa njikwa siri ike.
Ewezuga ndị nrụpụta ikuku akpọrọ n'elu, ndị otu anyị achịkọbara akụrụngwa na ahụmịhe bara ụba na nfuli mmiri n'ime afọ gara aga. Iji nye ndị ahịa ọrụ na ịdị mma karịa, Shanghai Air na -enyekwa nfuli mmiri na usoro ọgwụgwọ mmiri na asọmpi asọmpi na njikwa mma kacha mma.
Anyị na -enweta ntụkwasị obi na afọ ojuju nke ndị ahịa anyị site n'ichepụta ngwaahịa ikuku kachasị mma maka ụlọ ọrụ niile. Emebere ngwaahịa anyị niile maka arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya, mmezi dị mfe yana oke ike ike. Anyị na -ebupụ ihe karịrị mba 90 n'ofe uch zuru ụwa ọnụ dịka USA, East Europe, South Asia na Latin America wee nweta aha ọma n'aka ndị ahịa.
Shanghai Air na -aga n'ihu na -emepụta mmepe na njikwa ngwaahịa iji mezuo ihe ndị ahịa chọrọ. Dabere na ụkpụrụ ụlọ ọrụ “Ogo izizi, ndị ahịa lekwasịrị anya”, Shanghai Air na -aga n'ihu na -enye ndị ahịa ngwaahịa kacha mma, azịza ịchekwa ike na ọrụ dị mma na teknụzụ kachasị elu na akụrụngwa kachasị mma.
Site na teknụzụ dị elu na sistemụ njikwa njikwa siri ike iji nye ngwaahịa dị elu na -agbaso ụkpụrụ mba ụwa.
Nye ọrụ OEM na ngwaahịa nwere ike ịhazi ya dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị.
Mmepụta arụmọrụ dị elu iji hụ na oge nnyefe kacha ọsọ.
Ndị na-ahụ maka ọrụ ụlọ ọrụ a zụrụ azụ na nkwado ọrụ ụlọ 24hoho iji hụ na ọrụ ire ahịa ndị ọkachamara na oge ha bịara.
Representatives Ndị nnọchite ahịa na -asụ Bekee, Spanish, French, Russian na Arabic, nke na -eme ka ọ dịrị ndị ahịa anyị si n'akụkụ ụwa niile mfe iso anyị kparịta ụka.
Ka ọ bụrụ ọkachamara na -ahụ maka ikuku kacha atụkwasị obi n'ụwa
Ozi mba ụwa
Jiri mma wuo ọdịnihu, were iguzosi ike n'ezi ihe nweta otuto.
Ndị ahịa lekwasịrị anya, iguzosi ike n'ezi ihe dabere na ịdị mma ya, ihe ọhụrụ na nsonaazụ mmeri.
Amụma Ogo Ogo ikuku zuru ụwa ọnụ
Cheta mgbe niile ịdị mma bụ ntọala, ọ bụ ya mere onye ahịa ji ahọrọ anyị.
Ka ịchụso mmepe dị mma, na -aga n'ihu na -amụ ihe ma na -ewepụta ihe ọhụrụ, bụrụ onye ọkachamara na onye raara onwe ya nye.